Chii Chinonzi Scraping? 5 Nzira Dzokubva Semalt Kudzivirira Maitiro Asina Mutemo Maitiro eScraping
Kugadzirwa kwewebhu, inozivikanwawo sekukohwa kwewebhu, kuvhara screen kana kuti yewebhu data kuwedzera, iyo teknolojia inobatsira kuronga uye kubvisa zvinyorwa kubva kune imwe kana mamwe mawebsite. Iwe unogona kuchinja ma-URL akasiyana uye oashandise nenzira ye CSS, JSON, REGEX, uye XPATH mafaira. Saka, web scraping inzira yakaoma yekuunganidza ruzivo rwekutsvaga kubva mumambure - newest online casino for us players. Ikozvino mapurogiramu ekutsvaga webhu uye zvinogadziriswa zvinotangira kubva kune-ad-hoc kusvika zvizere zvakagadziriswa zvirongwa zvingashandura mawebsite ega kana mablogi kuti ave chinhu chakanaka uye chakagadzirwa zvakanaka.
Nzira dzekudzivirira kusabvumirwa kwemawebsite kusina mvumo:
A webmaster anogona kushandisa matanho akasiyana-siyana kuti anonoke kana kumisa bhu inokuvadza. Nzira dzinobatsira zvikuru dzinotsanangurwa pasi apa:
1. Chengetedza iyo kero ye IP:
Unofanira kubvisa spammers IP yega kana zvimwe zvishandiso zvinovimbika.
2. Dzinga web service APIs:
Zvakanaka kudzivisa web service APIs inogona kuratidzirwa nemaitiro. Bhoti dzinoshandisa michina yemagetsi dzinogona kudziviswa nehuyu nzira pasina dambudziko.
3. Chengetedza webhuta yako yewebhu:
Zvakakosha kuti isu tose tiongorore ruvara rwewebhu pamwe nehupamhi hwayo. Kana iwe usingashandisi maSeO services uye uchiri kugamuchira nhamba yakawanda yemasikirwo, iwe ungangodaro wakawirwa ne bot botani.
4. Shandisa captcha:
Unofanira kushandisa captcha mararamiro ekubvisa maipi bots uye website scrapers . Kazhinji kacho, bhoti haigoni kuona mhemberero yakanyorwa mu captcha uye haikwanisi kupindura matambudziko akadaro. Nenzira iyi, unogona kuwana vanhu kufamba chete uye kubvisa bots.
5. Zvemabhizimisi anti-bot services:
Nhamba huru yemakambani anopa antivirus uye anti-bot programs. Ivo vanewo mararamiro akasiyana-siyana anorwa-scraping services kune webmasters, mablogiki, vanogadzira, uye vadzidzisi. Iwe unogona kushandisa chero ipi zvayo zvemashumiro ekubvisa zvisiri pamutemo kutema web.
Nzira mbiri dzakasiyana dzekushandisa webpage scrapers paIndaneti:
Nema web scraper, unogona nyore nyore kuvaka sitemaps uye unofamba nheyo kuti uzviparadzanise.
1. Zvigadzirwa zvemavara nematengo:
Yakave yakaratidza kuti kukwaniswa kwematengo kunogona kubatsira kuvandudza mari yakawanda yezviwanikwa kubva gumi kusvika makumi maviri kubva muzana. Kana kamwe chete zvigadzirwa nemitengo zvakatsvaga, zvichava nyore kwauri kuti uzive kukura kwako bhizinesi rekutera uye kuti ungatengesa sei nhamba yakawanda yezvigadzirwa nemasevisi. Iyi nzira inowanzoshandiswa nefambi dzekufambisa, ema-e-commerce makambani, nemamwe mabhizimisi e-online.
2. Chengetedza kuvepo kwako paIndaneti nyore nyore:
Icho chinhu chakakosha uye chikuru chekutsvaga webhurapi apo mapurogiramu ebhizinesi uye kuongororwa kwemasayiti zvakagadzirwa. Inoshandiswa kutarisa kushanda kweimwe chigadzirwa kana basa, maitiro uye maitiro evashandisi, uye ramangwana rebhizimisi. Iyi web scraping strategy inogona kubatsira kuita mazita nematafura zvichienderana nekuongorora kwevashandi nebhizinesi analytics.